Usaama Bin Laadin Waxaan La Kulmay Saddex Jeer [Waxaa Qoray Hamid Mir]
Monday September 13, 2021 - 12:19:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaamid Mir waa saxafi udhashay dalka Pakistan
Saldhigga ciidanka Xabashida degmada Xudur oo weerar lakulmay iyo sarkaal Muqdisho lagu dilay.
Rooble oo Mombasa kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya.
Saldhigga ciidamada Itoobiya ee degmada Buurhakabo oo weerar culus lakulmay iyo warar kale.
Saldhigyo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Wajeer oo weeraro lakulmay.
Wasiir Beylle "dhaqaale xumo baahsan baa dowladda soo wajahday oo waxaan ku soconaa Sagxadda".
Saldhigyada ciidamada Itoobiya ee Gedo iyo Bakool oo weeraro lakulmay.